Magical Island Getaway- Isla Tijereto (Main Room) - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguCamila
UCamila unezimvo eziyi-299 zezinye iindawo.
Khipha iplagi kwesi siqithi separadesi kwaye ujabulele ubunewunewu bokuba ngaselwandle. Wonwabele amanzi aluhlaza kumgama oziimitha ezi-2 ukusuka endlwini kwaye uqubhe emva kweeyure zomsebenzi phantsi kwelanga elitshisayo leCaribbean.
Sivuya kakhulu kuba unomdla wokuza kwindlu yethu yosapho kwiZiqithi zaseRosario!
I-Isla Tijereto yenzelwe kwi-50 kwaye ijolise ekubeni yi-100% ezinzileyo. Indawo yayo yobuchule ivumela ukuba ifumane umoya kunye nempepho emini nasebusuku. Sinenkqubo yokucoca amanzi emvula esivumela ukuba sibe namanzi amatsha unyaka wonke. Asinaso isibane sombane kodwa sine solar panel yokutshaja iikhompyutha, ii-ipad njl, izibane zegesi, izibane zekhandlela zothando, ikhitshi legesi kwakunye nefriji esebenza ngeebhloko zomkhenkce esizibonelelayo.
Sinenekazi elicocayo eliya kuqinisekisa ukuba liyakumbambazela ngexesha lokuhlala kwakho. Uzakupheka kwakhona izitya ze-costeño eziqhelekileyo ezifana ne-arepa de huevo, i-arroz con coco kunye nentlanzi eqhotsiweyo (ndingakunika uluhlu lokuthenga igrosari. Intlanzi kunye neekreyifishi zingathengwa, ngexabiso elincomekayo kakhulu, kwisiqithi kubalobi basekuhlaleni. ).
Indlu ibamba ukuya kuthi ga kwi-9 abantu kwaye ibandakanya idokhi yangasese, i-terrace, i-hammocs kunye neebhedi zokushuka. Kuya kuqinisekisa ukuba uchitha iholide enkulu elwandle.
Le ndlu ikwanayo nephenyane lokuthatha uhambo oluncinci lokufumanisa ukujikeleza isiqithi.
U-Alejo noPaloma baya kukwazi ukukunyamekela ngexesha lokuhlala
Inombolo yomthetho: 100362